Global Voices teny Malagasy » Ny faritra Pamir ao Tadjikistan: Tandindonin-doza hatrany ve ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny faritra Pamir ao Tadjikistan: Tandindonin-doza hatrany ve ?
Voadika ny 17 Oktobra 2018 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Ricard Altes Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Tajikistan, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Voina
(Marihina fa tamin'ny volana Desambra 2015 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
“Transport-dush-khorog ” avy amin'ny mpisera ​Alj87 wikipedia. Nampiasana lisansa CC BY-SA 3.0 .
Dikan-dahatsoratra nosoratana voalohany tamin'ny teny Catalan ity manaraka ity.
Matetika no mitranga ny voinan'ny fihotsahan'ny tany any Tajikistan, ary matetika tsy mijanona mitatitra momba izany ny fampitam-baovao manerantany.
Somary hafa  ny zava-nitranga tamin'ny 7 Desambra 2015, taorian'ny nitrangan'ny horohorontany mirefy 7,2 tamin'ny maridrefy Richter tao amin'ny faritra mitoka-monina ao Pamir any amin'ny repoblika Sovietika teo aloha ary tany amin'ny 22 kilaometatra monja avy eny amin'ny farihin'ny tendrombohitra saropady amin'ny horohorontany ny foibeny .
Vetivety anefa dia tsy liana intsony ireo mpanao gazety raha vao tafarina ny fahavoazana ary nianjera tany amin'ireo manampahefana sy ny fikambanana miasa ao amin'ny faritra ary ny mponina ao an-toerana ny asa fanorenana ny trano an-jatony.
Araka ny filazan'ny komity misahana ny vonjy taitra ao amin'ny firenena mahantra, niteraka fahafatesan'olona roa ny fihotsahan'ny tany vokatry ny horohorontany – ary simba tanteraka ny trano miisa 237.
Ny lohasahan'i Bartang izay sarotra aleha no faritra tena voakasika, izay ahitana ny trano miisa 214 ary ny fihetsehan'ny mponina mba hanokafana indray ny rohim-pifandraisan'ny hany lalana tokana ao amin'ny faritra: ny Lalambe Pamir izay malaza erantany .
Ny sarin'ny  Lalambe Pamir tao amin'ny Wikipedia. Nampiasana lisansa CC BY-SA 3.0 tao amin'ny Wikimedia Commons.
Fonenan'ny mponina manana fiaviana Iraniana ny faritra any andrefan'i Pamirs Tajik izay honenan'ny ankamaroan'ny mponina ao Tajikistan.
Tsy toy ny ambin'ireo firenena izay ahitana ny vahoaka miditra amin'ny finoana Sonita, fa mpanjohy ny Ismailisma Pamir ny mponin'ny Pamirs , sampana Shiisma mifandraika amin'ny Aga Khan , mpitarika ara-panahy fanta-daza.
Nanokana ezaka lehibe tamin'ny fampiroboroboana sy ny fanabeazana ny vondrom-piarahamonina Ismaili miparitaka eran'izao tontolo izao, anisan'izany i Kenya, Bangladesh, Afghanistan, Tajikistan ary Madagasikara ny Orina Mpanasoa Aga Khan.
Ity orina mpanasoa ity dia matetika manampy, na manolo ny governemanta Tajik amin'ny asa fampandrosoana ao amin'ny Pamirs.
Tadjikistan no repoblika mahantra indrindra amin'ny repoblika post-Sovietika, ary efa ho antsasaky ny harin-karena faobe ny vola nalefan'ireo olona nifindra monina niasa any Rosia .
Tombanana fa 60% -n'ny mponina no miaina ambany tokonan'ny fahantrana.
Nisy ny fikambanana sasany mifandraika amin'ny faritr'i Pamir no nanao fanentanana hanangonam-bola mba hanampiana vonjy amin'ny sakafo sy akanjo mafana ho an'ireo olona very fananana tamin'ity loza farany nitranga ity.
Nampiditra pejy iray tao amin'ny gofundme  sy ny Bartang Has a Future  izy ireo.
Maro tamin'ireo fandraisana anjara no nalefa tamin'ny alàlan'ny FTMF =ONG ao an-toerana ‘OUR’, izay natsangan'ny tanora tao Khorog herintaona lasa izay (2014) mba hanomezana làlana azo antoka ho an'ny fanampiana ao amin'ny firenena izay matetika ahitana ny governemanta voampanga ho nangalatra ny volan'ny fampandrosoana .
Ankoatra ny fanampiana vonjy taitra dia nanangana tambajotra ho an'ny mpampianatra sy mpampiofana an-tsitrapo ny FTMF =ONG . Miasa an-tsitrapo tanteraka ny ekipa.
“Mangarahara ny asa ataonay, ary afaka manara-maso ny vola fanampiana voaray farany rehetra amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook  (OO” OUR “) ianareo,” hoy ny iray tamin'ireo mpitarika ny vondrona Daler Nazarshoev raha nanoratra .
“Olona miisa 600 mahery no nomena toerana indray … Nipetraka tanaty tranolain'ny fahavaratra ireo olona izay namoy ny tranony na dia nahatratra hatramin'ny 22 degre aza ny hafanana”, hoy i Nazarshoev nanoratra.
“Tsy ho vitantsika ny hanolo-tena manontolo amin'ny fanorenana indray ny trano mandra-pahatonga ny volan'ny fahavaratra. Noho izany antony izany, mandinika ny mety ho fividianana ny tranolay Kyrgyz izahay mba hahafahan'ireo vahoaka voakasika miatrika ny ririnina. “
Tena ilaina amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny loza voajanahary, toy ny nitranga tamin'ny fiandohan'ity volana ity (Desambra 2015) ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina toy ny “OUR” .
Saingy misy ilay antsoina fatratra hoe ‘Sabatr'i Damocles’ izay mihantona eo amin'ny faritra ary tsy misy olona afaka miomana feno amin'izany.
Tamin'ny volana Febroary 1911, nisy horohorontany iray notombanana ho nahatratra 6,5 ka hatramin'ny 7,0 teo amin'ny maridrefy Richter ary nitarika ny fiforonan'ny Farihy Sarez, izay manana halalina eo amin'ny 500 metatra eo ho eo, halavana mirefy 76 kilometatra ary sakany mirefy 3,3 km. Mihazona rano mirefy 17 kilometatra toratelo ity farihy ity .
Maro ny fanadihadiana, anisan'izany ny nataon'ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny taona 2004, izay nahatsikaritra fa mety ho tena marefo ny farihy raha toa ka misy ny fihotsahan'ny tany mahery vaika izay hirotsaka ao anatin'ity farihy ity, ka mety hitarika tondra-drano any amin'ny reniranom-paritra ary hisy fiantraikany betsaka  amin'ny vahoaka hatramin'ny 5 tapitrisa manerana an'i Azia Afovoany.
Ny 7 Desambra 2015, tsy nihontsina i Sarez, saingy mbola misy hatrany ny fandrahonany ao amin'ny faritra.
* Vahoaka Aziatika Afovoany ny Kyrgyz, ary maro amin'izy ireo no mbola miaina amin'ny endrika fifindrafindra-monina. Mipetraka any Kyrgyzistan sy ao amin'ny faritr'i Pamir any Tadjikistan ihany koa ny ankamaroan'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/17/127720/
 Somary hafa: http://news.yahoo.com/tajikistan-struck-7-2-magnitude-quake-us-experts-092722994.html
 Ny sarin'ny: https://de.wikipedia.org/wiki/Pamir_Highway#/media/File:Ak-Baital_pass.jpg
 Aga Khan: https://en.wikipedia.org/wiki/Aga_Khan
 Bartang Has a Future: http://www.bartang-has-future.com/english/update-severe-earthquake-in-bartang
 pejinay Facebook: https://www.facebook.com/groups/1683462161904122
 fiantraikany betsaka: http://www.irinnews.org/report/72328/tajikistan-lake-sarez-disaster-preparedness-proceeding-well